Ukuzala Nokuncancisa | La Leche League SA
Yinto eqhelekileyo ukuncancisa kodwa wena nosana lwakho nisenokuthatha ixesha ukuba nikufunde.
Yenza ukuba umphambili womzimba wosana uthi ngca kumphambili womzimba wakho.
Beka ingono yakho ngaphantsi kwempumlo yosana. Le nto inceda usana luvule umlomo kakhulu. Sondeza umzimba wosana kangangoko kunokwenzeka ukuze ibele lakho lingene nzulu ngaphakathi emlonyeni wosana.
Akumelanga kube buhlungu ukuncancisa.
NCANCISA KWAOKO NAQHO.
Kwiintsuku ezimbalwa zokuqala, umzimba wakho wenza “ubisi lokuqala” olunezondlo olubizwa ngokuba yi-colostrum.
I-Colostrum ikhusela usana ukuba lungaguli ibe luba zizixa nje ezincinci.
Beka usana lwakho apha kuwe, ulusu eluswini. Le nto inceda usana luncance kakuhle.
Lukhuthaze usana ukuba luncance kayi-10 okanye ngaphezulu kwiiyure eziyi-24.
Unokwenza ukuncancisa ebusuku kube lula ngakumbi ngokugcina usana lwakho kufuphi.
Xa usana lwakho lumane luncanca qho, nawe kukhona uza kumane usenza ubisi.
Ngokuqhelekileyo usana luza kugqiba ibele lokuqala luze luyeke ukuncanca xa lwanele.
Lunike nebele lesibini. Luza kuncanca nebele lesibini xa lufuna ubisi olungakumbi.
NGABA LULAMBILE USANA?
Ukuba usana lugushuza ngakumbi, luyazibhijabhija ibe luncanca amanqindi alo, lunike ibele lakho.
Luncancise usana lwakho ngaphambi kokuba lukhale – xa lukhala loo nto ithetha ukuba sele lulifuna kakhulu.
Usana lusenokufuna ukuncanca ngakumbi ngamaxesha athile ngosuku, ingakumbi emva kwemini. Le nto ibangelwa kukuba ukuncancisa ayikokutya qha. Kukhusela usana lwakho lungaguli ibe kwenza luzive lukhuselekile.
Ngezinye iintsuku uza kufumanisa ukuba usana lufuna ukuncanca ngakumbi. Iqhelekile loo nto – iintsuku azizukufana. Abantu abadala basela baze batye ngokwahlukileyo ngalo lonke ixesha.
NGABA USANA LUFUMANA UBISI OLWANELEYO?
Umele ulubone kwaye uluve usana lwakho luginya xa luncanca.
Emva kweveki yokuqala, ubuncinane usana lufanele lube neenapukeni eziyi-3 ezinokungcola okutyheli namanapukeni ayi-6 amanzi qho ngosuku.
Usana lufanele lubuyele kubunzima bomzimba ebeluzelwe likubo kwiintsuku eziyi-7 ukuya kweziyi-14 emva kokuba luzelwe.
Iintsana ezingafumani lubisi laneleyo, zisenokungabi namandla maninzi ingakubi ukuba zibhijelwe ngqi ngeengubo. Ukuba unexhala, lususe kwezo ngubo uze ulubeke kuwe, ulusu eluswini. Le nto iza kulukhuthaza ukuba luncance ngcono buze bunyuke ubunzima bomzimba walo.
Ukuba aluncanci kakuhle usana, ungalukhamela ubisi lwakho uze uluselise lona usebenzisa icephe okanye ikwati yeplastiki.
NGABA USANA LUDINGA AMANZI OKANYE OKUNYE UKUTYA?
Usana lwakho aludingi manzi okanye okunye ukutya de lube malunga neenyanga eziyi-6. Ukunika usana oluncinci amanzi kusenokulubangela ukuba luluncance kancinci ubisi lwebele. Xa usana luncanca ubisi oluncinci, nomzimba wakho uqalisa ukwenza ubisi oluncinci.